Isniintii kalaamiidiyada oo markii kowiyotobnaad laga qabanqaabiyey dalka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Marthina Stäpel / P4 Skaraborg Sveriges Radio
Isniintii kalaamiidiyada oo markii kowiyotobnaad laga qabanqaabiyey dalka
La daabacay måndag 9 september 2013 kl 12.41
Kalaamiidiya ayaa ka mid tahay badanaaba dadka ku dhaca oo lagu kala qaado galmada. Dalkaan waxaa sannad walba cudurkaan qaada dad tiradoodu gaareyso 40000 oo qof, oo u badan dadka da’doodu u dhexeyso 15 ilaa 29 sano.
Dumarka cudurkaan qaada haddii aan laga daaweyn waxay khatar ugu sugan yihiin in ay noqdaan madhaleysyo, halka ay raggu khatar ugu sugan yihiin in ay awooddooda wax-dhaliddu xumaato.
Kalaamiidiya waxaa inta badan la isku qaadsiiyaa galmada aan loo isticmaalin qalabka la isku difaaco sida kondoomka. Bakteeriyada cudurkuna jirka qofka ayey ku jiri kartaa iyadoo aan wax astaamo ahi ka muuqan.
Qofka cudurkaan laga helo waxaa ku waajib ah in uu sheego dadkii uu la galmooday. Magaciisana lama sheegayo marka dadkaas lala xiriirayo.
Maanta waxay ku soo aaddey sannadkii kow iyo tobnaan oo dalka laga qabanqaabiyo maalinta isniinta kalaamiidiyada. Hadafka laga leeyahay ayaa ah la kordhiyo wacyiga dadka oo ku aaddan cudurkaan. Maantana waxaa qaybo badan dalka ka mid ah laga qabanqaabinayaa ololayaal dadweynaha loogu wacyigelinayo cudurkaan.
Dhammaan qaybihiisa waxaa lagu dhejiyey tabbeelayaal ay ku qoran yihiin halku-dhegyo ay ka mid yihiin: "Ha yareysanina cudurka kalaamiidiya!". Dhambaalka halkudheggu waa in dadka lagu dhiirrigeliyo in ay isbaaraan.